छड्के नजरले कर्की कर्की केटा हेर्छन् केटीहरु :: NepalPlus
छड्के नजरले कर्की कर्की केटा हेर्छन् केटीहरु
नेपाल प्लस२०७७ साउन २७ गते २०:२४
केटाहरुले केटी त मजैले हेर्छन। कोहि कोहि त केटी आउँदैछ भन्ने थाह पाए भने काम रोकेरै टाढैदेखि हेरिराख्छन। केटाहरुमाथि खुब आरोप लाग्छ केटि हेरेको। स्कूले जिवनमा त झन केटाहरुले यसो हेर्‍यो कि केटीहरु मुर्दार के हेरेको भन्न थाल्छन। किशोर अवस्थामा त प्राय अधिकांश पुरुषलाई अरोप लागेको हुन्छ केटीमाथि आँखा लगायो भन्ने। केटीहरुले केटा हेरेको आरोप भने झण्डैझण्डै लाग्दैन भनेपनि हुन्छ। त्यसको अर्थ के केटीहरुले चाहिँ केटाहरु हेर्दै हेर्दैनन त ? कहाँ नहेर्नु ? केटीहरु त झन माहिर पो हुने रहेछन त केटा हेर्न। त्यसो भए केटाहरुले किन थाह पाउँदैनन त केटीहरुले हेरिरहेका छन भनेर ?
यौन बिशेषज्ञहरु के भन्छन भने महिलाहरुलेपनि मनग्गै आँखा लगाउँछन पुरुषतिर। जति पुरुषले महिलालाई आँखा लगाउँछन उत्तिनै लागाउँछन रे माहिलालेपनि पुरुषलाई। कहिलेकाहिँ त पुरुषले महिलाको शरिर भन्दा महिलाले पुरुषको शरिर पो झन बढि हेर्छन भन्छन त बैज्ञानिकहरु। तर महिलाले पुरुषलाई हेरेको खासै नदेखिने तर पुरुषले महिलालाई हेरेको भने देखिने चाहिँ किन नि ! ल हेर्नुस त महिलाहरु कति चलाख ? आफुले चाहिँ अक्किल लगाइ लगाई हेर्ने अनि पुरुषले हेर्‍यो भने चाहिँ गोल्भेडा जत्रा आँखा पल्टाउदै गालीगर्ने। मुर्दार र सुर्दार नकटो र सकटो भन्दै।
हो, महिलाहरुमा यसरि सुटुक्क तर हाकाहाकिनै हेर्न सक्ने एउटा बिशेष खुबी हुन्छ । त्यसो भए केटाहरुले किन थाह पाउँदैनन त केटीहरुले हेरिरहेका छन भनेर ? हेर्दा त आँखा उस्तै देखिन्छन महिला र पुरुषका । भलै महिलाका अलि सुन्दर (?) होलान । उस्तै देखिएपनि कारण भने महिलाहरुको आँखाको बनावट हो। किनभने महिलाको आँखाको द्रिष्य क्षमता फराकिलो हुन्छ। अर्थात दुर्बिनको जस्तो । हेरिने वस्तु जति टाढा पुग्यो उती फराकिलो हुन्छ आँखाको द्रिष्य। अथवा टाढाको बस्तुलाई झन फराकिलोसित देखिने। त्यसैले महिलाहरुले पुरुषलाई ताकेर हेर्नै पर्दैन। त्यत्तिकै देख्छन ।
तर पुरुषहरुको द्रिष्य क्षमता भने ? बाँसको ढुङ्ग्रो जस्तो। दायाँबायाँ टाउकै घुमाएर नहेरेसम्म नदेखिने। उनीहरु टाढाको कुरा देख्छन। फाइदा के भने पुरुषहरुले महिलाले भन्दा टाढा सम्म देख्न सक्छन तर साँघुरो भागमात्रै। पुरुषहरुको द्रिष्य क्षमता लामो दुरिको तर साँघुरो हुन्छ। महिलाहरुको ठ्याक्कै उल्टो। त्यसैले कुनै महिलालाई हेर्नुपर्‍यो भने पुरुषले टाउको घुमाईघुमाई हेर्नुपर्छ। उनीहरुले टाउको नघुमाईकनै आँखा बटारेकै भरमा देख्ने हुनाले पुरुषहरुले टाउको घुमाएरै हेर्दा भ्रम पर्छ-यसले त मलाई अतिनै हेर्‍यो । त्यसैले पुरुषहरुमाथि आरोप लाग्ने गरेको हो महिलालाई हेर्‍यो भन्ने।